Factory Lanyard miasa - Mpanamboatra sy mpamatsy Lanyard miasa any China
Ny Lanyards dia tsy natao hampiasaina fotsiny ireo sary namboarina, fa lasa mandeha tsara kokoa noho ny fanampian'ny kojakoja sy fitaovana isan-karazany. Ohatra, ny fehy fohy misy carabiner dia ampiasaina amin'ny hetsika ivelany. Ny fehin-telefaona dia manamora ny fisondrotanao amin'ny alàlan'ny fisorohana anao tsy hiala amin'ny telefaona na aiza na aiza hadinonao. Afaka manafaka ny tananao ny mpihinana zava-pisotro rehefa mifanome tanana ianao mandritra ireo hetsika atao. Ny lanyard eyeglass fanatanjahan-tena dia manamboatra ny masomaso na aiza na aiza alehanao. Ny lanyard fakan-tsary dia mitazona ireo fakantsarinao tianao. Avelao ny lanyard LED, izy io dia mahatonga ny lanyard ho manintona sy mahasarika maso mandritra ny alina. Ankoatr'izay, azo ampiasaina amin'ny aiguillettes fanamiana sy fehiloha fombam-pivavahana. Hanjary miasa kokoa ny lanyard rehefa mivoaka ny kojakoja ilaina kokoa. Nanjary liana tamin'ny asa roa tonta ve ianao? Sa manana hevitra momba ny fiasan'ny lanyard manokana ianao? Ny fandefasana ny sary famantarana aminay dia hanome ny soso-kevitra arak'asa arakaraka ny filanao manokana. Na eo aza ny fanolorana ny vidiny tsara indrindra, voaaro ihany koa ny kalitaontsika. Amin'ny maha-mpanamboatra 37 taona antsika, ny marika sy ny fitomboan'ny tongotra dia mifandray akaiky amin'ny mpanjifantsika.
Tady fohy miaraka amin'ny Carabiner
Lanyards misy mpanokatra tavoahangy
Aiguillettes fanamiana sy fehiloha seremonaly